ESCAPISM - Umboniso Oyoun | Ukucinga ngokutsha kwenkcubeko
NgoDisemba 4, 2021 12:00 PM - NgoDisemba 24, 2021 13:00 PM
« maJuda! maJuda! maJuda! I-Chanukkah ekhethekileyo
I-ESCAPISM - INKQUBO YOKUQALA »
OoVimba abaFanekayo boKuchasa- Ngena ngoku!
Nge-ESCAPISM, i-Oyoun ivula iqonga lovavanyo lobugcisa kunye nentlalontle, ukudibanisa indawo ebonakalayo kunye neyomzimba. Kumboniso osebenzisanayo e-Oyoun Berlin ukusuka nge-3 ukuya kwi-24 kaDisemba, ababukeli banokufumana i-4 yofakelo lomdlalo oyingxubevange owenziwe ngamagcisa e-ESCAPISM: "tarare" ngu téa boyarchuk, "Thina kuneDijithali yeGazi" ngu-Izdihar Afyouni, "Guacuco" nguSol Martínez-Solé. kunye ne "Embryonic Babies of Hot Winters" nguAvita Maheen.
Lo mboniso usimahla. Zibhalele ixesha lokubeka ixesha Apha.
→ Disemba 04-23.12.2021, 12, 00:18 pm - 00:XNUMX pm
→ 24.12.2021/10/00, 13:00 a.m. - XNUMX:XNUMX p.m.
→ Ulwazi oluthe vetshe malunga neprojekthi kunye namagcisa anokufunyanwa Apha..
Le projekthi ixhaswa ngemali yi iSocioculture Fund ukusuka kwinkqubo ye-BKM "INTSHA YENKCUBEKO".
Uyilo lwebrendi nguRita Eperjesi (IG:@ritaeperjesi Iwebhusayithi).
◥ Nceda uqaphele: Ukuthatha inxaxheba kwimisitho e-Oyoun okanye undwendwele imiboniso yethu, kufuneka ube nobungqina bokugonywa / ukuchacha. Iimaski ze-FFP2 zinyanzelekile e-Oyoun de kube esinye isaziso. Ulwazi oluthe vetshe malunga nococeko lwethu lunokufumaneka Apha.
◥ E-Oyoun, akukho ndawo yocalucalulo ngokwesini, intiyo, i-queerphobia, i-transphobia, naluphi na uhlobo lobuhlanga okanye ucalucalulo olufana nokuchasa uMnyama, ukuchasa amaSilamsi okanye ubuhlanga obuchasayo ubuJuda, kunye nalo naluphi na uhlobo lokuziphatha ngobundlobongela okanye ndlongondlongo. I-Oyoun inikezela ngendawo ekhuselekileyo kubo bonke, iforamu evulekileyo yengxoxo kunye nendawo apho sixhasana kwaye simelane. Ukuba kukho umntu / kukho into ekukhathazayo ngexesha lomsitho, nceda uqhagamshelane nelungu labasebenzi bethu abakhoyo ukuze bancede! Ukuba ufuna ukwabelana nathi ngamava emva komsitho, nceda usibhalele i-imeyile> awareness@oyoun.de okanye usithumelele umyalezo ongachazwanga ngegama lethu. Website.
Nge-ESCAPISM, iqonga lenziwe e-Oyoun lovavanyo olubalulekileyo lobugcisa kunye nentlalontle edibanisa iindawo ezibonakalayo kunye nezomzimba. Kumboniso osebenzisanayo ukusuka nge-3 kaDisemba ukuya kwi-24, iindwendwe eziya e-Oyoun zinokufumana ukufakwa kwemidlalo edibeneyo emine eyenziwe ngabaculi be-ESCAPISM: "tarare" ngu téa boyarchuk, "Thicker Than Blood Digital" ngu-Izdihar Afyouni, "Guacuco" nguSol Martínez- I-Solé kunye ne "Embryonic Babies of Hot Winters" ngu-Avita Maheen.
Lo mboniso usimahla. Bhukisha ixesha lakho lokubeka ixesha apha.
→ Ungafumana ulwazi oluninzi malunga neprojekthi kunye namagcisa apha.
Le projekthi ixhaswa ngemali yi iSocioculture Fund ukusuka kwinkqubo ye-BKM "INTSHA YENKCUBEKO". Uyilo lwemizobo nguRita Eperjesi (IG:@ritaeperjesi Iwebhusayithi).
◥ Nceda uqaphele: Imfuneko yokuqala yokwamkelwa kwimisitho / kwimiboniso eOyoun sisitofu sangoku sokugonywa / isatifikethi sokubuyisela. Iimaski ze-FFP2 zinyanzelekile e-Oyoun de kube esinye isaziso. Unokufumana ulwazi oluninzi malunga nengcamango yococeko apha.
◥ Akukho ndawo e-Oyoun yocalucalulo ngokwesini, i-queer phobia, i-transphobia, naluphi na uhlobo lobuhlanga okanye ucalucalulo olufana nokuchasa abamnyama, ukuchasa amaSilamsi okanye ubuhlanga obuchasene nobuJuda kunye naluphi na uhlobo lobundlobongela okanye ubundlongondlongo. I-Oyoun inikezela ngendawo ekhuselekileyo yomntu wonke, iforamu evulekileyo yengxoxo kunye nendawo apho sixhasa kwaye simelane. Ukuba kukho umntu okanye into ekukhathazayo ngexesha lomsitho, nceda uqhagamshelane nelungu labasebenzi bethu abakhoyo ukuze bakuncede! Ukuba ungathanda ukusixelela malunga namava emva kwesiganeko, nceda usibhalele i-imeyile> awareness@oyoun.de okanye usithumelele umyalezo ongachazwanga ngegama lethu Iwebhusayithi.
NgoDisemba 24, 2021 13:00 PM
Ukuba nguAlman (Ukuvulwa)
Ngomhla woku-26 ku-19pm - 21: 30
Ukuba nguAlman (umboniso)
Ngomhla woku-27 ku-10pm - 19: 00
Ukuba nguAlman (Evala)
Ngomhla woku-27 ku-19pm - 21: 30